निजी घरको लागि डोरफोन - कसरी निजी घरमा ताररहित ढोका स्थापना गर्ने?
एक निजी घरको लागि डोरफोन - अन्तर्क्रियाका प्रकारहरू र कसरी सही मोड चयन गर्ने?
एक निजी घरको लागि एक आधुनिक अन्तर्वार्ताले आवासमा पहुँच नियन्त्रण गर्न सजिलो माध्यम हो, जसले यसको बासिन्दा र सम्पत्तीको सुरक्षा बढाउँछ। यसले अप्रत्यक्ष अतिथिहरूको लागि झन्झट कट्टर बनाउन मद्दत गर्नेछ। यन्त्र खरीद गर्नु अघि तपाईंले यस्ता उपकरणहरूको प्रकारहरू क्रमबद्ध गर्न आवश्यक छ।
Doorphones को प्रकार
घरको लागि एक पारंपरिक अन्तर्वार्ता ब्लकहरूको जोडी हो - बाह्य बुँदा प्यानल र भित्र। डिजाइनमा धेरै कोटीहरू छन्:
भिडियोको उपस्थिति (रङ्ग, कालो र सेतो) वा बिना।
ताररहित वा तार।
ह्यान्डसेटको साथ वा केवल हात-रहित कल गर्नको लागी एक बटनको साथ।
ह्यान्डसेट पोर्टेबल (रेडियो-इन्टरकॉम) हो वा स्थिर (यसले प्यानलबाट विच्छेदन गर्दैन)।
जब कसैले कल प्यानलमा बटन थिच्दछ, घरमा होस्टले प्रतिक्रिया दिन्छ र टाढा टाढा खोल्छ। उहाँ अतिथिको भ्वाईस सुन्न सक्नुहुन्न, तर यदि मनिटर संग एक मोडेल स्थापित छ भने यसको छवि पनि देख्न सक्छ। उपकरणको डिस्प्ले र विभिन्न अतिरिक्त सुविधाहरू - दर्शकहरूको तस्वीरहरू बचत गर्न, इन्टरनेटमा डेटा स्थानान्तरण, DVR को उपस्थिति, धेरै क्यामेराहरू जडान गर्न वा प्यानल कल गर्ने क्षमता।
एक देशको घरको लागि आधुनिक ढोका प्रायः तारद्वारा जोडिएको छ। यो विधि अधिक श्रमिक छ, अझै पनि सम्भव छ कि स्थापनाको समयमा यो अदृश्य तरिकामा संचार संचालन गर्न पर्खालहरु को छेउ गर्न आवश्यक हुनेछ। बाह्य र भित्ता भागहरू जोड्न चार तार जडान गर्ने केबल प्रयोग गरिन्छ, जुन फुटेजको प्रारम्भिक गणना अनुसार अलग-अलग खरिद गरिन्छ।
यो जमीनमा कम्तिमा 50 सेन्टीमिटरको गहिराइमा केबल राख्नु राम्रो छ। एक निजी घरको लागि इन्टरकॉमको काममा क्षति र बिगबिगीबाट बचाउनको लागि, तारहरू बेरिएको वा प्लास्टिक पाइपमा राखिएको छ। एक सस्ता र तेर्सो विकल्प केबल खुल्ला छ, कुन अवस्थामा यो प्लास्टिक स्लाट्स-च्यानलहरू, जो सतहको रङको लागि रोजिएको छ।
घरको लागि ताररहित डोरफोन
एक निजी घरको लागि उत्तम ढोकाहरू वायरलेस छन् , कुनै तार वा केबलहरू तिनीहरूलाई स्थापना गर्न आवश्यक छ। यस मेकानिमेसनको सफल अपरेसन ब्याट्री द्वारा प्रदान गरिएको छ, जसले आवधिक रूपमा चार्ज गर्नुपर्छ। यस्तो तन्त्रिकाको त्रिभुवन 50 मीटर सम्म छ। यस प्रकारको अन्तर्क्रियाको मूल्य यसको उच्च मूल्य हो, तर उत्पादनको गुण र बिछ्याउने सुविधाले यो क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्दछ।
निजी घरको लागि आईपी अन्तर्क्रिया
गृहको लागि उच्च-टेक आईपी अन्तर्क्रियामा थप विकल्पहरू छन्। यसको कल प्यानल उच्च-गुणस्तर भिडियो क्यामेरा, माइक्रोफोन, स्पिकर, प्रकार्य बटनहरूसँग सुसज्जित छ। आन्तरिक प्रत्युत्तर राउटर मार्फत इन्टरनेटमा जडान गर्दछ , होस्टको लागि सुविधाजनक स्थानमा अवस्थित टचपाडको उपस्थिति छ। अतिरिक्त वार्ता एकाइको रूपमा, तपाईं मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, एक स्थिर कम्प्युटर वा ल्यापटप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आईपी ​​क्लास प्रणालीहरू केबल वा ताररहित जडान गर्न सकिन्छ।
कम से कम विन्यास मा एक निजी घर को लागि कुनै पनि दरवाजा फोन को मालिक को लागि दर्शक को कुरा गर्न को लागि अवसर प्रदान गर्दछ (+ मनिटर संग एक मोडेल को चयन गर्दा) र घर को अंदर देखि गेट या मालिक को पिछडो पक्ष देखि प्रवेश द्वार खोलन। यसको अतिरिक्त, देश घरको लागि अन्तर्क्रिया निम्न कार्यहरू हुन सक्छ:
सम्पूर्ण इलाका को कवर गर्न को लागि धेरै क्यामेराहरु लाई जोडने र पैनलों को कल गर्ने क्षमता।
लकको रिमोट उद्घाटनको सम्भाव्यता।
दर्शकहरूको स्वचालित रूपमा भिडियो रेकर्ड गर्दा जब गति सेन्सरहरू सक्रिय हुन्छन्।
मालिकको अनुपस्थितिमा रेकर्डिङको लागि पर्याप्त मेमोरी।
भिडियो क्यामेराको लागि रोटरी तंत्र।
गति सेन्सर र जीपीएस अलार्म।
कल पट्टीमा उल्टो भिडियो लिङ्क स्क्रिन।
स्क्रिन र इकाईको सेन्सर नियन्त्रण।
फिंगरप्रिन्ट द्वारा लक लक नियन्त्रण।
इन्टरनेटमा अनलाईन पहुँचको सम्भावना।
मालिकको मोबाइल फोनमा स्वचालित अधिसूचनाहरू र सुरक्षा सेवा कल गर्दै।
तपाईंको मोबाइल फोनबाट कल संकेत दिनुहोस्।
खुला फंक्शनको साथ वाइफाइ अन्तर्क्रिया
ताररहित वाईफाई अन्तर्क्रियाले ढोका खुल्ला प्रकार्यसँग हल्का आईपी मोडेल हो। यो एक कल बटन, एक भिडियो क्यामेरा, एक गति सेन्सर र LAN केबलको लागि एक कनेक्टरको साथ कलिंग प्यानल हो। यो तंत्रलाई स्मार्टफोनको माध्यमद्वारा नियन्त्रित गरिएको छ, जसमा एक विशेष अनुप्रयोग स्थापना गरिएको छ। वाईफाई अन्तर्क्रियाको सहयोगमा, तपाईं घरमा सोफेमा मात्र नखोल्न गेट खोल्न सक्नुहुन्छ, तर संसारको जहाँबाट जहाँ इन्टरनेट जडान छ। यो फोनबाट विकेटको अवस्थाको निरीक्षण गर्न सजिलो छ र यदि आवश्यक छ भने अतिथि प्रविष्ट गर्न दिनुहोस्।
अन्तर्क्रियामा इन्टरकॉम प्रकार्य - के यो छ?
एक निजी घर को लागि एक इंटरकॉम संग एक इंटरक फंक्शन संग लैजानुपर्छ, एक बहु-मंजिला कुटीर को लागि धेरै कोठाहरु संग अनिवार्य छ। प्रणालीले तपाईंलाई विभिन्न कोठाहरूमा एकल नेटवर्कमा धेरै यन्त्रहरू संयोजन गर्न अनुमति दिन्छ। यस अवस्थामा, तपाईं ढोकाको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ र कुनै अन्तरक्रियाको साथ लक खोल्न सक्नुहुनेछ। यसको अतिरिक्त, अन्तर्क्रियाले परिवारलाई एक-अर्कासँग कुराकानी गर्न मद्दत गर्दछ, एकाइहरू घर भित्र आन्तरिक संचारको लागि अन्तरक्रियाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
DVR प्रकार्यको साथ इन्टरकॉम
अतिरिक्त बोनसको रूपमा, जो एक निजी घरको लागि ढोकामा लैजान सकिन्छ, फोटो वा भिडियो खिच्दै छ। सतर्क प्रविधीले मालिकको अनुपस्थितिमा गेटमा आउन सबैलाई फिक्स गर्दछ। 12-15 सेकेण्डका लागि छोटो क्लिपहरू क्यामेरा प्रयोग गरी कलिंग प्यानलमा रेकर्ड र यन्त्रमा भण्डार गरिएको रेकर्ड गरिएको छ। यसको आन्तरिक मेमोरीले 150 फोटोहरू समात्न सक्छ, रेकर्डिङ प्रकार्यको साथ अन्तर्क्रियाले 32 जीबी क्षमताको मेमोरी कार्डहरूसँग लैजान सक्छ, भिडियोको 24 घण्टासम्म भण्डार गर्दछ।
एक निजी घर मा एक दरवाजा फोन कसरि स्थापित गर्ने?
निजी हातको लागि इन्टरकॉम माउन्ट गर्न गाह्रो छ, तर तपाईको वास्तविक हो। मुख्य कुरा निर्देशन पालन गर्न र योजना अनुसार अनुसार उत्पादनका सबै तत्वहरू इकट्ठा गर्नु हो। एक निजी घर मा एक दरवाजा को स्थापना :
यो उपकरण सामान्यतया व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा सुविधाजनक उचाइमा स्थापित छ। 1,5-1,6 एम। पहिलो पहिलो तारमा राखिएको छ, यसलाई ढोका र घरमा लैजान्छ - इन्टरनेटको लागि "मुड़िएको जोडा" (यदि आवश्यक भए) र चार तार केबल, नालीदार नलीमा लुकेको छ। कलिंग पैनल मा पावर कर्ड असामान्य रूप देखि गेट भित्र विद्युत लक देखि निकाल दिए छ।
फिर्ती को भाग को लागि घर मा, एक 220 वी पावर कर्ड, मुड़ जोडी र चार तार, एक नालीदार नली मा संयुक्त, अलग देखि प्रदर्शित गरिन्छ।
एक विद्युत लक स्थापित छ, जसबाट देखि केबल केबल एक कल को ओभरले को लागि सडक मा जान्छ।
उत्पाद को बाहिर को लागि एक आला कटौती एक चक्की र छिलियों को मदद संग काटएको छ।
कलिङ भागको सम्पर्कहरू अडियो, भिडियो अन्तर्क्रिया च्यानलहरू र सडकमा लक भएका छन्। आला मा सम्मिलित छ र लक नियंत्रण इकाई (संक्षिप्त BLS)।
सबै जडान बाह्य प्यानल शरीर अन्तर्गत लुकेको छ, जसको पछि यो फिक्सिंग प्लेटमा निश्चित छ।
त्यसैगरी, घर भित्र, कुराकानी एकाइले तारहरूसँग जोडिएको छ, एक 220 V पावर केबल र डाउल्स र आत्म-ट्याप गर्ने शिकंजाहरू प्रयोग गरेर पर्खालसँग सजिलैसँग जोडिएको छ। ढोका फोन प्रयोगको लागि तयार छ।
एक निजी घर मा ढोका को लागि कनेक्शन योजना
एक निजी घरमा एक ढोका फोन स्थापना गर्नु अघि, तपाईं यसको जडानको चित्रण गर्न आवश्यक छ। जडान गर्दा मुख्य बिन्दुहरू:
यो एक सर्किट मा एक लक संग दरवाजाफोन जोडने को लागि एक मानक योजना हो: घर मा स्थित रिसीभर देखि, तपाईंलाई धेरै तारहरु लाई आवश्यक्ता छ। यदि तपाईं केवल एक अडियो यन्त्र स्थापना गर्न योजना बनाउनुहुन्छ, तपाईंलाई एक तार तारको आवश्यक भिडियो सिग्नलमा मोडेल माउन्ट गर्न तीन तार केबल चाहिन्छ। अन्तर्क्रियाको दुवै भागहरू चरण-डाउन पावर आपूर्तिको मद्दतले 220 V सँग जोडिएको छ।
दुई तारहरू बिजुली आपूर्तिको लागि जिम्मेवार छन्, अडियो र भिडियो सिग्नलका लागि अर्को जोडी। अन्तर्क्रिया प्रयोग गर्न, प्रत्येक अतिरिक्त उपकरण सीरीजमा चार तार तार द्वारा सर्किटमा जोडिएको छ।
वायर्ड मोडेलको विपरीत जुन doorphone मनिटर द्वारा संचालित छ, ब्याटरियरिङ संग सुसज्जित छैन एक ताररहित सडक मोडेल पनि नेटवर्क र इन्टरनेट केबलसँग जोडिएको हुनुपर्छ। यसको स्थापनाको ठाँउको पछि, त्यहाँ एक आउटलेट वा बिजुली कोर्ड हुनुपर्छ। यदि बिजुली आपूर्ति शक्तिशाली छ, त्यसपछि बिजुली लक र कल प्याड एक 200 V स्रोतमा जडान गर्न सकिन्छ, जुन चित्रमा संकेत गरिएको छ।
जनवरी सेप्टेम्बरदेखि "ब्ल्याक शुक्रबार"
खाना भण्डारको लागि वैक्यूम थोरै
Aromalamp - कसरी प्रयोग गर्ने?
न्यानो पानीको फिसलका पाइपहरू
कास्ट आयरन प्यान
फोनको लागि चुम्बकीय धारक
म बिना ट्याब्लेट मेरो ट्याब्लेट कसरी चार्ज गर्दछु?
फ्रिजको लागि भोल्टेज स्थिरता
मैले बच्चाको लिंग कहिले पत्ता लगाउन सक्छु?
प्रेममा गिरने पहिलो संकेत
वजन घटाने को लागि जलाशय
रातको कपालको लागि मास्क
के लागि लायक लायक छ?
भान्सामा टेबल टेबल
पर्खालहरूमा कवकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
बच्चामा कडा खरानीको उपचार कसरी गर्ने?
सेन्ट सुलेमान को Catacombs
गलियारे को लागि एक ओमन
भन्दा प्रिय महसुस गर्नुको कारण?
तपाईंको हातले कपालको लागि मेट्नेहरू
बिल्लियोंका लागि क्याटोफन
Aquarium माछा गिलास कांच
पिज्जाको लागि फारम
म चिकनबाट के गर्न सक्छु?
केल एक्सटेन्सनको लागि के चाहिन्छ?
सेतो उच्च ऊँचाइको जूता
देशमा कसरी सूरजमुखी बढाउने?
आधुनिक समाजमा ग्लोमो - यसलाई कसरी सम्झौता गर्ने?